“လုံခြုံကြွယ်ဝတဲ့ အနာဂတ်ဆီသို့ အာမခံအသိပညာ မျှဝေစို့” – SoShwe
Home/Banking & Finance/“လုံခြုံကြွယ်ဝတဲ့ အနာဂတ်ဆီသို့ အာမခံအသိပညာ မျှဝေစို့”
Soshwe ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာ အာမခံအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေများ ရှိကြသလား ? ? ?
ဒါဆိုရင်တော့ လာမယ့် ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့ကျရင် “လုံခြုံကြွယ်ဝတဲ့ အနာဂတ်ဆီသို့ အာမခံအသိပညာမျှဝေစို့ ” National Insurance Awareness Day အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် GGI Nippon Life မှ ကျင်းပသွားဖို့ရှိကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါရစေ . . .
ဒီပွဲကို Junction Square ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းဧရိယာမှာ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်တွေပါဝင်မလဲဆိုရင် . . .
– ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအာမခံအကြံပေးများနဲ့ အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခွင့်။
– ဆရာဝန်များနဲ့ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနိုင်ခွင့်။
– ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ်၊ အဆီအချိုး (BMI) အခမဲ့တိုင်းနိုင်ခွင့်။
– ကလေးများအတွက် ပန်းချီရေးဆွဲနိုင်မယ့် ကစားကွင်းနေရာ။
– Spin Wheel လေးလှည့်ပြီး ရင်ခုန်ကံစမ်းခွင့် ၊ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲအစီအစဉ် စတာတွေအပြင် အခြားအစီအစဉ်များစွာလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် . . .
အာမခံအကြောင်းလည်း သိချင်တာမေးလို့ရ၊ အစီအစဉ်တွေမှာလည်း ဆင်နွှဲလို့ရမယ့် ဒီပွဲလေးဆီကို GGI Nippon Life ချစ်သူတို့အားလုံး အရောက်လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် . . .
ကဲ… ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့ junction square ပရိုမိုးရှင်းဧရိယာ မှာ တူတူဆုံကြမယ်နော်!
“လုံၿခဳံႂကြယ္ဝတဲ့ အနာဂတ္ဆီသို႔ အာမခံအသိပညာ မွ်ေဝစို႔ ”
Soshwe ရဲ႕ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြထဲမွာ အာမခံအေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္စားတ့ဲသူေတြမ်ား ရွိၾကသလား ? ? ?
ဒါဆိုရင္ေတာ့ လာမယ့္ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔က်ရင္ “လုံၿခဳံႂကြယ္ဝတဲ့ အနာဂတ္ဆီသို႔ အာမခံအသိပညာမွ်ေဝစို႔ ” National Insurance Awareness Day အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ GGI Nippon Life မွ က်င္းပသြားဖို႔ရွိေၾကာင္း လက္တို႔လိုက္ပါရေစ . . .
ဒီပြဲကို Junction Square ရဲ႕ ပ႐ိုမိုးရွင္းဧရိယာမွာ မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုထူးထူးျခားျခားအစီအစဥ္ေတြပါဝင္မလဲဆိုရင္ . . .
– ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအာမခံအႀကံေပးမ်ားနဲ႔ အခမဲ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခြင့္။
– ဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ အခမဲ့ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္။
– ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္၊ အဆီအခ်ိဳး (BMI) အခမဲ့တိုင္းႏိုင္ခြင့္။
– ကေလးမ်ားအတြက္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲႏိုင္မယ့္ ကစားကြင္းေနရာ။
– Spin Wheel ေလးလွည့္ၿပီး ရင္ခုန္ကံစမ္းခြင့္ ၊ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ စတာေတြအျပင္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားစြာလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ . . .
အာမခံအေၾကာင္းလည္း သိခ်င္တာေမးလို႔ရ၊ အစီအစဥ္ေတြမွာလည္း ဆင္ႏႊဲလို႔ရမယ့္ ဒီပြဲေလးဆီကို GGI Nippon Life ခ်စ္သူတို႔အားလုံး အေရာက္လာခဲ့ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ . . .
ကဲ… ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔ junction square ပ႐ိုမိုးရွင္းဧရိယာ မွာ တူတူဆုံၾကမယ္ေနာ္!
Tags GGI Insurance
Previous မျက်မမြင် ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်အာရုံကို ကုစားပေးခဲ့တဲ့ မက်ဆီ။
Next အိမ်တစ်အိမ်ဝယ်ယူပြီး ဝယ်ယူခဲ့တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ (၅၅၀%) အထိ မြင့်တက်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ဦး။